BISHỌP EKPURULA NKATA N’ISI GWA BUHARI OKWU – hoo!haa!!
Onye chọpụtara ma bụrụkwa onye isi ụka ahụ ana-akpọ Living Faith Church, bụ Bishop David Oyedekpo nọrọ ụnyahụ bụ ụka gwa onye isi ala bụ Buhari na gọmenti ya anaghị azụtara ndi ala anyị ihe atụrụ ya n’ahia.
Bishọp Oyedekpo kwuputara mwute ya ka ndi nke akpọrọ ndi nchị ehi si egbu mmadụ ka-ana-egbu anụmanụ n’ala anyị.
Ọ sịrị hoohaa, na iwe juru ya obi ka esighị were ndụ ndi mmadụ Chukwu kere eke kpọrọ ihe ọbụla n’ala anyịa.
Bishop Oyedekpo gakwara n’ihu kwue ka o si ewute ya na ejizi ọkụ latrik eme ndi ala anyị, “iche na mmadụ bụ ewu”. O metụkwara aka ka ụlọ ọrụ na-esipụta mmanụ ụgbọ ala anyị siri nwụchaa pịị tinyekwara ka ego anyị bụ naira siri daa kụọ afọ n’ala ma-atụnyere ya na ego nke ndi Amịrịka bụ dọla.
Oyedekpo sịrị na-agaghị atụ anya na obi ga-adị ya mma mgbe ana-emebi ọrụ aka nna ya. Ọ sịrị na Chukwu n’onwe ya kwuru na ya ga na-eweso onye ajọ omume iwe kwa ụbọchị ndụ ya niile.
N’okwu ya, bishop sịrị na ọ na-adị mfe ikwu ekwu karịa ime eme. Ojiri obi iwe jụọ, ‘ịhụla ebe ngbanwo dugara anyị taata malite n’afọ puku abụọ na iri na ise?’
Ọ sịrị na mbụ na-agwara anyị na anyị ga-eji otu naira zụrụ otu dọla, ma zurụkwa otu lita mmanụ ụgbọ ala na ọnụ ahịa naira iri anọ na ise. Ọ sịrị na-agwakwara anyị na gọmenti ọbụla mara ihe ekwe na-akụ kwesịrị ime ka ọkụ latrik bụrụ akwaa-akwụrụ n’ime ọnwa atọ. Ọ sịkwara na ka ihe si kwụrụ kịta na eweputa akwụkwọ mgbakọ na mwepu gọmentia, na ha nwetara efu n’ime otu naarị. (0%).
Oyadekpo sịrị na onye chọrọ mgbanwo ga-eji aka ya rụpụta ya. Ọ dọrọ gọmentia aka na nti ka o kunie n’ụra ka ọ gharakwa inweta mgbanwo n’ụdị eji mara ndi Naijiriya.
Bishọp Ọyadekpo sịrị na onye na-adọnyere ndi ogbu mmadụ aja n’ukwu ga-echekwa aka ịghọrọ iwe Chineke n’ebe ọ dị ọkụ. Ọ sịrị na onye nke ihe na-ewe Chineke iwe na-atọ ụtọ abụghị nwa Chineke.
N’ikpe azụ, ọ sịrị na ka ha ha bụ ndị mere onye mụrụ ụmụ gbara aka nwa, mekwa ndị lụrụ di nakwa ndi lụrụ nwunye bụrụ ndi isi-mkpe ga-emechaakwa dị ka ndia. Ọ sịrị na ụmụ ihe ọjọọ ndia agaghị adịgide n’ala anyị.
Previous Post: MMỤỌNWỤ ETIGBUELA MMADỤ N’ỤLỌ ỤKA
Next Post: ANYA